Isitudiyo - Indawo yokuhlala engu-6 enegumbi lokugezela langasese - I-Airbnb
Isitudiyo - Indawo yokuhlala engu-6 enegumbi lokugezela langasese
Murcia, Región de Murcia, i-Spain
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ricardo
· Zingu-0 izindlu zokugeza zokwabelana
U-Ricardo unokuphawula okungu-64 kwezinye izindawo.
I-Artistic Residences Operating Theatre ikunikeza igumbi elibanzi nelikhanyayo elinombhede ophindwe kabili ongu-150cm. Lokhu kuhlala kuyatholakala kumaciko asezindaweni zokuhlala nasezindlini zokuhlala ezimfushane nezimaphakathi. Izivakashi zingasebenzisa izindawo ezivamile: amagumbi okugeza, ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula, ivulandi elingaphakathi, amathala kanye nezindawo zokupaka amabhayisikili.
I-El Quirófano iyisikhungo sokudala ubuciko esisenkabeni yensimu yezithelo yase-Murcia, lapho izindawo zokuhlala nezitudiyo kuhlangana khona endaweni exubile elungiswe ngokuphelele ngoMeyi 2019. Sinikezela ngezinsizakalo ezengeziwe zokupaka izimoto ezizimele kanye nokuqashwa kwamabhayisikili.
Itholakala e-La Arboleja, enkabeni yensimu yezithelo yase-Murcian, engamakhilomitha angu-2.2 nje ukusuka enkabeni yedolobha futhi izungezwe izihlahla zamawolintshi nezikalamula. Endaweni unezinsiza eziyisisekelo zebhikawozi, isuphamakethe kanye nezindawo zokudlela. Njengoba indawo yokuhlala, ukupaka kulula endaweni yethu.
Hola, soy Ricardo, el director del espacio artístico cultural 'El Quirófano', y si te animas a venir a Murcia y pasar algún día con nosotros, haremos todo lo posible para que te sientas como en casa.
Nsuku zonke, indawo yethu ihanjelwa yilabo abanomthwalo wemfanelo, abahlale bephethe izivakashi, ngaphezu kokuba khona kwabaculi abahlala khona kanye nezinye izivakashi, kulula kakhulu ukuthola umoya opholile futhi ojabulisayo wokuphila.
Hlola ezinye izinketho ezise- Murcia namaphethelo